च्याउबाटै करोडपति « Loktantrapost
६ भाद्र २०७३, सोमबार १०:५९
बाहुनडाँगी । विश्व प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी साहित्यकार तथा दार्शनिक थोमस पेइनले भनेका छन्–‘जति कठिन सङ्घर्ष हुन्छ, विजयी त्यति नै शानदार हुन्छ ।’ मानिस जन्मिएपछि नै सङ्घर्षको अध्याय सुरु हुन्छ । जीवनलाई असल मार्गमा र सफलताको सिँढीमा उकाल्नका लागि लामो सङ्घर्ष, त्याग र जीवनको उर्वर समय खर्चिएको हुन्छ । त्यस्तै एक आदर्श पुरुष हुन् झापाको बाहुनडाँगी–७ गाडागल्लीका श्यामराज भट्टराई ।
पढेकाले कृषिमा लाग्नु हुँदैन भन्ने मानसिकतालाई चिर्दै भट्टराईले कृषि पेसा सुरु गरे । ८० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या भए पनि केही अलग ढङ्गले उनले आफूलाई डोहोर्याउन सफल भए । त्यसैले अहिले उनी सफल कृषक भएका छन् । ‘८० हजारमा च्याउ खेती सुरु गरेँ, निरन्तरको मेहनतले नै अहिले सानो–ठूलो भए पनि लगानी गर्न सक्ने भएको छु’–उनले भने ।
श्यामराज भट्टराईले अहिले झापाको बाहुनडाँगीमै भट्टराई एग्रीकल्चर एन्ड स्पोन प्रालिको स्थापना गरेका छन् । व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक तहमा पढ्दा–पढ्दै भट्टराईले कृषिको विकास र त्यसैबाट जीवनयापन गर्ने सपना देखे । र, कार्यान्वयनमा जुटे । ‘शङ्करदेव क्याम्पसमा ब्याचलर पढ्दा–पढ्दै धन कमाउने मन भयो, र व्यवसाय सुरु गरे’, उनले भने – ‘स्थायी रुपमा वि.सं. २०५४ सालदेखि च्याउ खेती सुरु गरेँ, अहिले विस्तारको काममा व्यस्त छु ।’
भट्टराईले कृषिमा गरेको सङ्घर्षको कथा लामो छ । र, आमनेपाली युवाका लागि प्रेरक पनि छ । २०३१ साल असार २१ गते बुवा हिरण्यप्रसाद र आमा स्व. सुभद्रादेवी भट्टराईको कोखबाट धनगढीमा जन्मिएका श्यामराज अहिले झापा फर्किएर व्यवसायमा जम्ने कोसिसमा छन् । २०४७ सालमा मेची जनसाधारण माविबाट एसएलसी उतीर्ण गरेका भट्टराईले सुपथ मूल्यको सहकारी पसल खोले । दुई वर्ष जति पसल गरेपछि उनले चीनबाट सामान ल्याउने व्यवसाय सुरु गरे । तर, उनको मन कृषि पेसातर्फ नै थियो । ‘त्यसैले कसरी हुन्छ कृषिमै भविश्य बनाउने सोचका साथ नयाँ कामको रिसर्चमा लागेँ’, उनले लोकतन्त्र पोस्टसँग भने–‘त्यसैले २०५४ सालबाट च्याउ खेतीमा लागेँ ।’
भट्टराईको च्याउ खेती यात्रा काठमाडौंको बलम्बुबाट सुरु भयो । ‘एक रोपनीमा च्याउ लगाएँ, २ वर्षपछि झापा फर्किएँ’, उनले भने–‘र, च्याउको बिउ उत्पादनमा लागेँ ।’ फेरि काठमाडौं फर्किएपछि उनले कीर्तिपुरमा ल्याव खोले । २०६० सालमा खोलिएको ल्यावबाट उनले मनग्गै आम्दानी गरे । ५ वर्षपछि उनी धापाखेल सरे । ‘धापाखेलमा मार्केट राम्रो थियो’, उनी भन्छन्–‘पोखरामा पनि ल्याव सञ्चालनमा ल्याएँ ।’
वि.सं. २०६८ सालमा पोखरामा च्याउ उत्पादन गर्ने ल्याव खोल्न पुगेका भट्टराईले माग अनुसार च्याउ उत्पादन गर्न सकेनन् । ‘बजार ठूलो, माग पनि धेरै’, उनले थपे–‘राम्रो उत्पादन भएकाले पनि हामीलाई बजार माग धान्नै गाह्रो पर्यो ।’ धेरै भन्दा पनि गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिएको उनले बताए । भट्टराईका अनुसार काठमाडौं र पोखरामा च्याउको बजार ठूलो छ । माग अनुसारको उत्पादन गर्न सके सयौंलाई रोजगारी दिन सकिने र लाखौंको नाफा गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पको प्रभाव भट्टराईको व्यवसायमा पनि पर्यो । भारतीय नाकाबन्दीले च्याउ उत्पादनका लागि चाहिने इन्धन र अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव भएपछि उनी फेरि झापा फर्किए । ‘बाहुनडाँगीमा भट्टराई एग्रीकल्चर एन्ड स्पोन प्रालिमार्फत कृषिकै लागि काम थालेँ’, उनले भने–‘च्याउ उत्पादनको काम झापामै सुरु गरेँ ।’ भट्टराईको नेतृत्वमा झापाको काँकरभिट्टामा होटल मसरुम खुलेको छ । भट्टराईको टिममा उर्मिला कोइराला, रोशन बस्नेत र रोशन निरौला रहेका छन् । ‘सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिने हाम्रो उद्देश्य हो’, भट्टराईले भने–‘सेवा दिएपछि आफै नाफा हुन्छ । हामीलाई धेरै नाफा कमाउँछु भन्ने छैन ।’ चाँडै १२ बिगाह जग्गामा अर्गानिक खेती गर्ने योजनामा रहेका भट्टराई च्याउ खेतीमा लाग्न चाहनेलाई तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् ।
भट्टराईले करिब २२ लाख रुपैयाँको लगानीमा होटल खोलेका हुन् । ८ जनाले होटलमा रोजगारी पाएको उनले बताए । बाहुनडाँगी–६ मा च्याउ उत्पादन गर्नका लागि ११ लाख रुपैयाँको लगानीमा ल्याव निर्माण गरिएको छ । ‘च्याउको ल्यावमा ९ जना युवालाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ’, उनले थपे – ‘अर्गानिक खेती गरेपछि अझै धेरैले रोजगारी पाउँछन् ।’ भट्टराईले च्याउबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उदाहरण चाँडै पेश गर्ने उद्घोष गरे । उनी भन्छन् – ‘विदेश जानै पर्दैन, च्याउमा लगानी गर्ने हो भने दैनिक दशौँ हजार आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’ ८० हजारबाट सुरु गरेको व्यावसायिक च्याउ खेतीबाट उनले १ करोडभन्दा धेरैको सम्पत्ती आर्जन गरेका छन् । ‘तर, कुन च्याउ कुन ठाउँमा लगाउने हो त्यस विषयमा जानकारी हुनु पर्छ, मेहनत गरे च्याउबाटै लाखौँ कमाउन सकिन्छ’, उनले थपे – ‘त्यसै कारणले बाहुनडाँगीलाई च्याउ उत्पादन केन्द्रकै रुपमा अघि बढाउने मेरो अठोट हो ।’
तन्त्र पोस्ट दैनिकमा २०७३ भदौ ६ गते प्रकाशित)